Tŷ Ni - Ukubaleka okuLungeleneyo kuSapho
Ikhaya elamkelekileyo losapho kwidolophu yaseHeath eCardiff. Uhambo lwemizuzu engama-30 ukusuka kumbindi wesixeko kunye nokufikelela ngokukhawuleza kwi-Victorian Roath Lake kunye ne-Sprawling Bute Park kunye neTaff Trail.
Ibonelela ngegumbi lokulala eliphindwe kabini, iwele / kabini, kunye negumbi elinye lokulala, le ndlu intle inegumbi losapho elitofotofo, ikhitshi elikhulu lokutyela, igumbi lokuhlambela losapho, kunye negadi-ilungele abo banqwenela ukuchitha ixesha kwesi sixeko sikhulu okanye ukusebenza okwethutyana. Isibhedlele esikufuphi saseYunivesithi yaseWales okanye iYunivesithi yaseCardiff.
Ikhaya losapho elilingana nesisa kwidolophu yaseHeath eCardiff, le ndawo ifanelekile kwiintsapho kunye neengcali ezinamagumbi amabini okulala kwigumbi elinye lokulala, kunye negumbi lokuhlambela elitsha elihlaziyiweyo.
Umgangatho ongezantsi ulungele ukonwabisa okanye ukuphumla kunye negumbi lokuhlala elipholileyo elinesofa ye-2 & 3 yokuhlala kunye ne-49" ye-Samsung TV eneenkonzo zokusasaza simahla.Igumbi lokutyela kunye nekhitshi zidityanisiwe ukwenza indawo entle yangoku yokonwabisa, inekhitshi eligcweleyo elibandakanya ioveni ephindwe kabini, isitovu segesi esitshisayo esi-7, kunye nesikhenkcisi esikhulu saseMelika.Ungathetha neendwendwe zakho kunye nosapho njengoko behleli bejikeleze itafile enkulu yegumbi lokutyela elinezihlalo ezisi-8.
Okanye uyise egadini eneendawo ezi-2 zokuhlala, kunye netafile yokutyela enabahlali aba-6.
48" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-Netflix
Indawo yeHeath yaseCardiff iqhayisa ngokufikelela ngokulula kwi-3 yeepaki ezintle zaseCardiff, ezibonelela ngemisitho, ukuhamba ngesikhephe, imidlalo, kunye namabala okudlala.
Isitalato esikhulu esikufutshane sibonelela ngeendawo zokutya ezizimeleyo ezimangalisayo, iivenkile zekofu, kunye nabathengisi.
Thatha ikofu yakho yasekuseni kuBlake & Brew kunye nesonka esitsha esivela kuAlex Gooch ophumelele ibhaso, okanye ibrunch emnandi evela eLonga.
Chitha ngorhatya kuMgangatho woMbutho okanye ubambe iHeisenburger enetswele layo elinxilisayo eliBlue ukusuka kwiGot Beef.